राष्ट्रिय सदाचारको कुरा, हाँसोको विषय
मुख्य पृष्ठकन्टिर-दृष्टिराष्ट्रिय सदाचारको कुरा, हाँसोको विषय
कन्टिर–बाबू देशको अवस्था वर्तमानमा जस्तो छ त्यस्तो हुनुमा कुनै एक पक्षको मात्र दोष देख्दैनन् । यसो हुनुमा विगतदेखि वर्तमानसम्म सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका सबैको मिलिभगत देख्छन्, कन्टिर–बाबू । यसमा कसैलाई कुनै शङ्का छ भने कन्टिर–बाबूलाई इन–बक्स गरे हुन्छ । कन्टिर–बाबू केही उदाहरणसहित प्रष्ट्याउन प्रयास गर्नेछन् ।
कन्टिर–बाबूको स्पष्ट मत छ– मुलुकमा थिति बिग्रिनुको दोष जति आज सत्ताबाहिर रहेकाले सत्तापक्षतिर पन्छाएर आफूहरू भने पानीमाथिको ओभानो हुन मिल्दैन ।
त्यसो त कन्टिर–बाबूलाई सबै कुरा थाहा नहोला । तर उनको आजसम्मको अनुभवले भन्छ– खासमा विगतदेखि नै बिचौलिया र बनियाहरूको जगजगी भएको देश हो यो । यहाँ जेमा पनि कमिसन, नाफा अनि व्यक्तिगत लाभको खोजी र खेती गरिन्छ ।
कन्टिर–बाबू भन्छन्– जुन देशमा सत्तालाई साध्य बनाइन्छ र त्यसैलाई सबथोक मानिन्छ, त्यहाँ सबैले मिलेर भाले खाने कुरा स्वाभाविक लाग्छ । देश जो लुट्नु छ, सबै मिलेर लुटिरहेका छन् पालैपालो । लुटाहाहरूको कुनै नैतिकता हुन्न ।
सत्ता सञ्चालकलाई बिचौलिया र बनियाहरूले यसरी बुद्धि भुटेका छन् कि सत्ता चलाउन जो आए पनि उनीहरूको दुस्प्रभावबाट मुक्त हुन सक्दैनन् । अहिले पनि बनियाँहरूको जगजगी बढेको बेला छ ।
गत वर्ष प्रदूषणमुक्त बाहनको भन्सार महसुल बढाएर चकलेटको महसुल कम गरिएको विषयमा कन्टिर–बाबू बढी जान चाहन्नन् । तर चिनी र युरिया काण्ड हिजो पनि भएकै हुन नि, सधैँ ओम्नी र यतिको मात्र किन उछित्तो काढ्ने ? हिजोका दिनमा लाउडा र चेक एयरको कुरा पनि सुनिएकै हो, केवल वाइड बडीको मात्र कुरा गरेर हुन्छ ?
कन्टिर–बाबू भन्छन्– जुन देशमा सत्तालाई साध्य बनाइन्छ र त्यसैलाई सबथोक मानिन्छ, त्यहाँ सबैले मिलेर भाले खाने कुरा हुन् । देश जो लुट्नु छ, सबै मिलेर लुटिरहेका छन् पालैपालो । लुटाहाहरूको कुनै नैतिकता हुन्न ।
यो त नेपाल हो नि, फिनल्यान्ड थोडै हो ? त्यहाँकी प्रधानमन्त्रीले सरकारी खर्चमा खाजा खाएको कुरा राष्ट्रिय सदाचारको विषय बन्छ र त्यस घटनाको अनुसन्धान प्रहरीले गर्छ । तर नेपालमा यो सन्दर्भ धेरैका लागि हाँसोको विषय बन्न सक्छ ।
अझ राजनीति गर्नेका लागि त फिनल्यान्डका प्रधानमन्त्रीको कुरा अट्टहासकै विषय बन्ला । यहाँ त्यस्ता कुराले कुनै अर्थ राख्दैन । नेपालजस्तो देशमा राजनीति गर्ने भनेकै पैसा कमाउन हो भन्ने मान्यताको विकास भएको छ । यसरी पैसा कमाउन विचौलिया होस् कि कमिशनखोर, तिनको स्वार्थ पूरा गर्ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।
अनि जनता नि ? कन्टिर–बाबू भन्छन्– अरे यार छोड, कौन पुछे खेसडी के दाल ?
कन्टिर–बाबू दोष सदाचार